Nhau - Girazi Bhodhoro Kugadzira Maitiro
Huru Mhando dzeGirazi:
Type I - Borosilicate Girazi
Type II - Yakabatwa Soda Lime Girazi
Type III - Soda Lime Girazi
Zvishandiso zvinoshandiswa kugadzira girazi zvinosanganisira anenge 70% jecha pamwe nemusanganiswa chaiwo wesoda ash, limestone uye zvimwe zvinhu zvakasikwa - zvinoenderana nezvinodiwa nepfuma mu batch.
Paunenge uchigadzira svutugadzike yemafuta egirazi, yakapwanyika, inogadziridzwa girazi, kana kuti Celet, chinhu chakakosha chinongedzo. Kuwanda kwecentlet inoshandiswa mubandi regirazi kunosiyana. Cullet inonyungudika pane imwe tembiricha yekuderedza iyo inodzora mashandisiro esimba uye inoda mashoma mashoma zvigadzirwa.
Borosilicate girazi haifanire kugadzirwazve nekuti igirazi rinodzivirira kupisa. Nekuda kwemamiriro ayo ekupisa kupisa, girazi re borosilrate harizungunuke pane tembiricha yakafanana neiyo Soda Lime girazi uye inozoshandura iwo mamonwa ekuonekwa muchoto muchikamu panguva yekusungunuka zvakare.
Zvese zvigadzirwa zvekugadzira girazi, kusanganisira cullet, dzinochengeterwa mune batch imba. Ivo vanobva vaiswa pamudyandigere munzvimbo inoremerwa nekusanganisa uye vanozopedzisira vakwidziridzwa mumabolhop hoppers ayo anopa magirazi eficha.
Nzira dzeKugadzira Girazi midziyo:
Yakapofumadzwa Girazi inozivikanwa zvakare segirazi rakaumbwa. Mukugadzira girazi rakapepereswa, hovhoni yegirazi yakakwirisa kubva muchoto inonongedzwa kumuchina wekuumba uye mukati memidziyo umo mhepo inomanikidzwa mukati kuti ibudise mutsipa uye yakajairwa mundiro. Kana dzangove dzakaumbwa, dzinobva dzazivikanwa seParison. Pane maviri akasiyana maitiro ekuumba maitiro ekugadzira iyo yekupedzisira mudziyo:
Blow & Blow Kuita - inoshandiswa kune midziyo yakatetepa uko parison inogadzirwa nemhepo yakamanikidzwa
Press & Blow Kuita-akashandiswa pakakura dhayamita yekupedzisa midziyo iyo parison yakaumbwa nekudzvanya girazi ichipokana negurokuta rakaumbwa nesimbi plunger
Kubata Girazi inoumbwa nechirongwa chekuswededza dhiza uchishandisa maDanner kana maVello maitiro kuti uwane dhiri rakakora uye gobvu. Girazi rinodhonzwa pamusoro pemutsara wevanotsigira anodhinda nemuchina wekudhirowa.
Danner Maitiro - girazi rinoyerera kubva muchoto rinofungidzira nenzira ye ribhoni
Vello Maitiro - girazi rinoyerera kubva muchoto rinofungidzira mune ndiro robva raumbwa
Yakaputika Girazi Kuumba Maitiro
Blow uye Blow Kuita - mweya wakamanikidzwa unoshandiswa kugadzira gob kuita parison, iyo inosimbisa mutsipa kupera uye inopa gob chimiro. Iyo parison inozoendeswa kune rumwe rutivi rwemuchina, uye mweya unoshandiswa kuifuridza kuti iite sezvairi kuda.
Press uye Blow Kuita- plunger inoiswa pekutanga, mweya unobva watevera kugadzira gob kuita parison.
Pane imwe nguva danho iri raiwanzo shandiswa pamidziyo yakakura yemuromo, asi nekuwedzerwa kweVuvhimi Yekubatsira Muitiro, ikozvino rinogona kushandiswa kuita nemuromo wakamanikana mafomu zvakare.
Kusimba uye kugovera zvakanakira munzira iyi yekugadzira girazi uye kwakabvumira vanogadzira ku "saina" zvinhu zvakajairika senge mabhodhoro edoro kuti achengetedze simba.
Mamiriro ezvinhu - zvisinei nemafambisirwo, kana midziyo yegirazi yakarohwa ikaumbwa, midziyo yacho yoiswa muAnnalingaling Lehr, umo tembiricha yadzo inodzoserwa kumusoro kunosvika kuma1500 ° F, yobva yaderedzwa zvishoma nezvishoma kusvika pazasi 900 ° F.
Uku kudzidzira uye kutonhora zvishoma kunobvisa kushushikana mumidziyo. Pasina danho iri, girazi rinogona kupwanyika nyore nyore.
Kurapa Kurapa - kurapwa kwekunze kunoiswa kuitira kudzivirira kutakurwa, izvo zvinoita kuti girazi riwedzere kupunzika. Iyo yekubika (kazhinji polyethylene kana tin oxide yakavakirwa musanganiswa) inosaswa pamusoro uye inobata pamusoro pegirazi kuti iite tin oxide coating. Uku kukwirira kunodzivirira mabhodhoro kubva kunamatira kune mumwe kune mumwe kuderedza kuputsika.
Tin oxide coating inoiswa seanopisa magumo ekurapa. Yekurapa kwekupedzisira kurapwa, tembiricha yemidziyo inoderedzwa kusvika pakati 225 kusvika 275 ° F isati yashandiswa. Aya marasha anogona kushambidzwa. Kupisa kweKupisa kunoiswa pamberi penzira yekusimbisa. Kurapa kunoshandiswa mune iyi fashoni kunoenderana negirazi, uye hakugone kushambidzwa kubviswa.
Kurapa Kwemukati - Yemukati Yekufambisa Kurapa (IFT) ndiyo maitiro anoita girazi reType yegirazi mune Type II girazi uye anoiswa pagirazi kudzivirira kutumbuka.
Kuongorora Kwemhando -Kupisa Kwemhando Yekupedzisira Kuongorora kunosanganisira kuyera bhodhoro uremu uye kutarisa zviyoro zvebhotera neine kwete enda. Mushure mekusiya kupera kunotonhora kwe lehrr, mabhodhoro anozopfuura nemeshini yekuongorora zvemagetsi inoona pachayo zvikanganiso. Izvi zvinosanganisira, asi hazvina kugumira ku: madziro kukobvu kuongororwa, kukuvara kutaridzika, kusimudzira kuongororwa, kuisa chisimbiso pamusoro pekutarisa, parutivi rusvingo rwekutsvagisa uye base scan.
Kuti udzidze zvakawanda nezveLabho Girazi Dzinokuvadza & Maitiro Ekuongorora Girazi Packaging, ndapota tinya apa kuti uverenge zvimwe uye utore bhuku rekushandisa kuti ubatsire kuona kana iwe uchifanira kunge uine chekuita nehurema.
Mienzaniso yeBlow & Blow Containers
Boston Round Bhodhoro
Mafuta Sampu Mabhotoro
Mienzaniso ye Press & Blow Containers
Wide Mouth Packer Mabhotoro
French Square Mabhotoro
Vakapedzeredzwa Pakati Pakati Round Bottles
Tubular Girazi Kuumba Maitiro
Kubaya saizi kubva pa6mm kusvika pamakumi matanhatu neshanu
Kudhirowa matani anosvika 400m paminiti pamasayizi madiki
Girazi rinoyerera kubva muchoto pamberi pechimiro senge mbabvu, inowira kumucheto kumusoro kwehembe rinopingirira, rinotakurwa paburi raive rakapoteredzwa kana pombi.
Ribhoni rakaputirwa nejira kuti rigadzire girazi rakatsetseka, iro rinoyerera pasi panza uye nepamusoro pebato.
Iyo bhubhu inozoiswa pamusoro pemutsara wetsigiro rolling nemuchina wekudhirowa uri kure nemamita zana nemakumi mairi.
Izvo zviyero zvetibhubhu zvinogadzwa sezvo girazi rinotonhorera kuburikidza neyakagadzika nzvimbo pachikamu chisina kutsigirwa pakati pekuputika uye yekutanga mutsara unodhonzera.
Girazi rinoyerera kubva muchoto pamberi pekupinda mune ndiro mune rakavharwa indasitiri mandrel yakaiswa kana bhero rakakomberedzwa neonifice mhete.
Girazi rinoyerera nepakati pegore nzvimbo pakati pe bhero nemhete rinobva rafamba kupfuura mutsetse wevanodzikisa kumuchina wekudhirowa unosvika kumamirimita mazana matatu kuenda.
Tube Dhonza Hwakanaka Kudzora
Kana machubhu apera iwo, anoedzwa akawanda uye kuongororwa kuti ave nechokwadi chekuti anotevedza zvemhando yepamusoro. Kuongorora kwekuona kunoitwa neyepamberi, yepamusoro-resolution kamera system yekubvisa hurema. Kana ichinge yaumbwa nekuchekwa kusvika pane chaipo, zvipimo zvinobvumidzwa.
Mienzaniso yeTubing Girazi